Uma ufuna ukwenza ukuthi ikhaya lakho eliyingqayizivele, futhi indlela yakhe eyingqayizivele, kubalulekile ukucabanga mayelana nomklamo olungaphambili lwesonto. Architects namuhla sipho umoya izinhlelo ezisebenzisa ikhono elikhulu ukuze kuqalise ukusebenza nemibono. izinkinga Technical zingaxazululwa kanye tebuciko.
izakhiwo ezinjalo zihluke ambozwe ezivamile kulelo phakathi kwezindonga asekelayo kanye ebusweni zokuhlobisa ishiywa i igebe emoyeni. Ebhekene fixed hhayi phezu kogange, ezinye ibanga, futhi ngayiphi isungule yasibamba izinhlelo ezikhethekile.
Izingxenye ze-subsystem ngoba ventfasada
Subsystem ngoba ventfasadov siqukethe izingxenye eziningana. Design lwalezi nhlelo wenziwa ne zifudumele izindonga zangaphandle axube ukwahlukanisa izinto ngaphansi ulwelwesi. Kulesi igebe air uhlala phakathi isembozo zokuhlobisa kanye ukwahlukanisa zokuzivikela.
Isakhiwo asekelayo siqukethe kubakaki ukuthi benzelwe nodonga dowels kanye amahange. Ukuze amabhrakhethi ebhekene panel awashintsheki ngamaphrofayela asekelayo, lapho ukusetshenziswa hardware. Subsystem kusho isidingo ungqimba ukushisa ekuvikeleni lapho izidingo ezikhethekile. Material ngoba kumelwe silondoloze ukuma ngaphandle beya phansi ngaphansi isisindo sazo, kodwa futhi abonise ukumelana isikhutha ukhunta. Injongo eyinhloko yale ungqimba iyona izakhiwo nangokuvikela kanye nekhono ukudlula umhwamuko. Isendlalelo kufanele kube ukumelana nomoya umthwalo futhi yini usabele nale mpahla isisekelo sokuma subsystem.
Libe ungqimba olubamba ukushisa
Subsystem ngoba ventfasadov kuhilela ukufakwa ukwahlukanisa odongeni usebenzisa izikhonkwane obukhethekile izigqoko enkulu. A imfuneko lena isidingo laying ungqimba esiqhubekayo zihlale zifudumele. Izikhala nokusasamba kulokhu akufanele kube, ngoba zisenza sibe amabhuloho ezishisayo.
Kubalulekile ukuba unakekele ngisho nokuba khona ungqimba ungangenisi amanzi. Lokhu kuzovimbela umswakama Ukungena ku ukwahlukanisa wezangaphakathi.
Indaba for the izingxenye futhi subsystems ventfasada isakhiwo
Subsystem ngoba ventfasadov simele Uhlaka okuyinto ngokuvamile ezenziwe ngensimbi lashukumisa. Phakathi senqubo yokukhiqiza, mikhiqizo ingase camera nge powder upende, kanye nobuchwepheshe ejwayelekile noma ukonga. Lokhu kuzoncika ukubaluleka imikhiqizo. Ukudayiswa kungabonwa kanye ne-aluminium subsystems ukuthi babe umsebenzi ofanayo, kodwa musa nokugqwala futhi ukuphila kwethu kube isevisi eside, okuyinto kulingana isisetshenziswa lesi sakhiwo.
Subsystem ngoba ventfasadov kungase zimiswe futhi insimbi engagqwali nezinkuni. Inketho wesibili othize, futhi akunandaba mqondo ukusebenzisa ezifundeni nge kunomswakama. Kuye yokuma asekelayo amaphrofayli subsystem ungaba nomklamo walo. Ngezinye izikhathi yezingxenye ahlelwe thwi, futhi kwezinye izimo - nendawo. Abanye ochwepheshe zisebenzisa ubuchwepheshe, lapho makhemikhali ngezindlela ezimbili, ukwakha cell.
amaphrofayli Ubujamo Isikhala phakathi kwabo kuzoncika izici wawungakanani impahla zokuhlobisa. I kunazo obusezingeni design isiphambano amadivayisi ezinjalo ingasetshenziswa ebhekene iziphi izinto ngenxa amathuba ebanzi lokukhuphula. Ukuze ulungise aduduze esetshenziswa ihange amahange ezenziwe ngensimbi lashukumisa noma insimbi engagqwali.
Subsystem ngoba ventfasada egwadle has izingxenye eziningana eziyinhloko, okuyilezi:
nangokuvikela impahla ;
isivikelo emoyeni imithwalo.
Njengoba lokugcina impahla esetshenziswa ulwelwesi Indwangu ezisekelwe ungangenisi amanzi, vetroizolyatsionnogo noma isisi isithiyo izinto. Ukuvikelwa okunjalo kuyadingeka ukuze bavikele impahla kusukela izici zangaphandle ezimbi. Ulwelwesi lingasetshenziswa ngokuhlanganyela ukwahlukanisa, noma kunguwe wedwa. Kuvikela ukwahlukanisa kusuka kumiswa ekuqongeleleni umswakama kanye dampness. Ekhuluma ewukuhlakanipha okwenziwe ukwahlukanisa impahla ingasetshenziswa amaminerali uvolo, polystyrene enwetshiwe polystyrene extruded. Lesi sendlalelo kunciphisa conductivity ezishisayo isakhiwo futhi kunciphisa ukudluliswa ukushisa.
Umoya olungaphambili lwesonto, noma kunalokho subsystem awukwazi ukusebenzisa izinto ezahlukene ngoba zokuhlobisa kodwa futhi ukusetshenziswa ngokuhlanganyela ongakhetha ezishibhile futhi kuyabiza wempahla. Subsystem ukuthola eqinile, okuhlala, amelana ukugqoka futhi zidinga yesondlo sakugcina. Izimfanelo zakhe ke akaphelelwa, musa fade futhi ayikwazi wadalula uthuli kwezulu. Aluminium subsystem ngoba ventfasada ngokuvamile iqhathaniswa nezinye enamathela yangaphandle. Kuphela ezimweni ezimbalwa, izinhlelo ezinjalo bayabiza. Ngokwesibonelo, usimende olungaphambili lwesonto izobiza eshibhile kancane, kodwa khona inhlansi yethemba abanjalo kudinga umsebenzi yezimonyo ukuqeda nokushiyeka kufanele kwenziwe ngezikhathi ezithile.
Izinzuzo main of the subsystem ngoba ventfasadov
Lashukumisa ventfasada subsystem kunezinzuzo eziningi, phakathi kwabo:
ithuba ukuze level kwamanzi;
Uma odongeni has a ugobile ke umhlahlandlela, ungayifihla iyiphi zeziboya. uhlelo ezinjalo liyokuma kuze kube iminyaka engu-30 noma ngaphezulu. Ingasaphathwa futhi ubumsulwa imvelo, ngoba izinto zokwakha Awekho ukungcola yendabuko ukuthi kungaba khona kumakhophi abathile banamuhla.
izinhlelo ezinjalo kahle futhi uvikeleke umthwalo esindayo izindonga kusuka umswakama okungenzeka langena kusuka ngaphandle. Uma ungenalo ukuvikela olungaphambili lwesonto, ukuthi ubuso bayo zingavela isikhunta, dampness, isikhunta nezinto ezincane eziphilayo. izinhlelo ezinjalo excellently noshintsho ngo lokushisa, zingabantu ukumelana nomlilo, ukuthi ngezinye izikhathi kusebenza ugodo, njengoba kungenzeka ilangabi retardants elisetshenziswa inqubo yokukhiqiza yasibamba izinhlelo.
Incazelo Diat subsystem
Diat Subsystem ngoba ventfasadov iyatholakala namuhla anhlobonhlobo. It has kakhulu umlilo ukusebenza, kakhulu ukugqwala ukumelana, kuqinisekisa ngezinga eliphezulu olungaphambili lwesonto tebuciko, ngoba igebe phakathi tile odongeni kuyoba mayelana 5 kuphela mm.
Ayikho ezingabalulekile kangako Kuyaphawuleka ukuthi Diat uhlelo inikeza nethuba lokuqedela izindonga zangaphandle nanoma iyiphi impahla. izinhlelo egibele bengumsebenzi eziyingqayizivele production ezifuywayo. Zitholakala kusukela ngo-1991. Phakathi izinzuzo ezengeziwe lula ukufakwa bungabonakala, ikhono ukuze sivale lapho sisilela ugobile ebusweni the uhla kusuka 1 kuya ku-15 cm. Ngalesi izosebenzisa ubakaki ejwayelekile.
Supply ventfasada subsystem eyenziwa nomkhiqizi Russian, okuyinto ugcizelela ukuthi imikhiqizo abe namandla high futhi Coefficient eliphansi conductivity ezishisayo ukuthi kubangelwa ukusetshenziswa e senqubo yokukhiqiza akuyona aluminium, futhi insimbi engagqwali.
Ukubalwa subsystem ventfasada kuhilela ukuthola inani amathrekhi. Ukuze wenze lokhu, ukubala azungezwe isakhiwo kanye ukuphakama kwamanzi esiphelele. Ipherimitha izocacisa ukuthi kungakanani udinga ukuqondisa. Ukuze wenze lokhu, kubalulekile ukwazi ukuthi Ubukhulu ine impahla yokuqedela. Kuyinto lokhu ipharamitha ziyonquma ibanga phakathi amaphrofayli. Uma usukwazi lokhu sibalo, azungezwe isakhiwo zingahlukaniswa zibe ke, ezizohlinzeka inani iziqondiso. Lokhu kuyiqiniso uma izakhi ezibekwe ngenhla.
Fighter Dmitry Sosnovsky - a sosondonzima esesabekayo emhlabeni okuxubile karate